Nagu saabsan - Shenzhen Chance Technology Co., Ltd.
Shenzhen Chance Technology Co., Ltd. waa qayb ka mid ah iibka dibada ee Matrix Crystal Technology (Shenzhen) Co., Ltd, oo la aasaasay 2005, iyadoo haysatay khibrad 13 sano ah oo ku saabsan naqshadaynta iyo soo saarista bandhigyo yar oo LCD ah laga bilaabo 0.96 "ilaa 13.3" , E-warqad, bandhig OLED. Waxaa jira 6 xariiq oo wax soo saar leh oo leh mashiinno si otomaatig ah u wada shaqeeya, mashiinno xoqan, mashiinnada COG + FOG, qalabka wax lagu shubo, qalabka mashiinnada lagu shiro ee BL-ka, iwm. 10 + shaqaale ka tirsan koox tayo leh iyo 200 oo shaqaale ah ayaa halkan u jooga inay soo saaraan waxyaabaha ugu fiican. Waqtiga ugu sarreeya, 100K kumbuyuutar kumbuyuutarrada LCD waxaa dhammaystiray qiyaastii shaqaalaha 400 halkan maalin kasta.
Si loo bixiyo shaashado tayo sare leh, la kulan shuruudaha loo habeeyay, taageerida macaamiisha si ay suuqa u sahamiyaan waa masuuliyadeena iyo hadafkeena markasta. Sidaa darteed, waxaan fiiro gaar ah u siineynaa tayada dhinac walba. Waxaan doorannaa alaab-qeybiyeyaal heer sare ah sida AUO, Innolux, CPT, LG iyo Hitachi. Waxaan tababarnaa shaqaalaha si loo horumariyo wax soo saarka. Waxaan u tababbaraynaa dadka wax iibiya inay ugu adeegaan macaamiisha xamaasad iyo aqoon xirfadeed.
Fursadu waa alaab-qeybiyaha ugu weyn ee shirkadaha caanka ah, BYD, TCL, DJN oo aad ka hesho jawaab celin wanaagsan. Kasbashada kalsoonida macaamiisha waxay sare u qaadeysaa kalsoonidayada iyo hamigeenna ah inaan si buuxda u taageerno macaamiisha.
1. LCM-teknolojiyad sare leh oo leh saameyn bandhig OLED laakiin qiimo jaban.
2. waayo-aragnimo 13-sano ah oo ku saabsan qaabeynta iyo soo saarista shaashadda LCD.
3. Bandhigyo gaar ah oo la bixiyay.
4. 6 khadadka wax soo saarka. 10 + shaqaale koox tayo leh.
5. Suuqa ballaaran ee Yurub, Ameerika, iyo Aasiya.
6. Jawaab deg deg ah. Taageero farsamo xirfadeed. Waqtiga dhalmada oo gaaban.
Fursadu waa kaliya adiga adiga kaamil ah!